Soomaaliya: Waxaa loo halgamayaa sidii loo gaari lahaa dadka ugu nugul - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Médecins Sans Frontières (MSF) waxaa ay laba-laabtey dadaalladeedii ay ku gaareysey kuwa ugu baahi badan Soomaaliya, halkaas oo ay
ka shaqeyneysey muddo ka badan 20 sano. Ururkan caalamiga ah ee caafimaadka waxaa uu laba-laabey awooddiisa uu carruurta ay nafaqo-xumadu hayso uu ugu daweynayo sagaalka mashruuc ee uu ka wado guud ahaan dalka si uu wax uga qabto heerarka nafaqo-xumada ee dhowaan kor u kacey. Haseyeeshee, iyada oo ay hal bil ka soo wareegatey markii ay MSF bilowdey hawsha ay wax uga qabaneyso xaaladda degdegga ah, ayaa horumarka laga sameynayo in daryeel caafimaad lagu gaarsiiyo goobaha ka baxsan Muqdisho uu weli yahay mid gaabis ah. Xannibaadaha hortaagan hawlaha MSF ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, oo ay weheliso walaaca laga qabo nabagelyada caasimadda, Muqdisho, ayaa ilaa hadda soo koobey ballaarintii ay ku sameyn lahayd hawlaheeda caafimaadka.
Dadka ku nool koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa ay ka tan badiyeen dagaal hubeysan, abaar iyo adeegyadii bulshada iyo kuwa daryeel caafimaadka ee aaney haysan 20kii sano ee la soo dhaafey. Alfonso Verdu, oo ah maareeyaha barnamaijka MSF ee Soomaaliya, ayaa yiri: “Xaaladda nafaqada ee hadda jirtaa waxaa ay ka dul timid baahiyihii caafimaad ee ballaarnaa ee horeyba aan loo daboolin”.
MSF waxaa ay ka shaqeyneysey in ay wax ka qabato baahiyaha caafimaad ee aan la daboolin 20kii sano ee la soo dhaafey. Ururka ayaa sameeyey mashaariic caafimaad oo tiro badan oo bixiya adeegyo kala duwan, oo ay ka mid yihiin daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, daryeelka hooyooyinka iyo carruurta, daaweynta qaaxada, daryeelka sarreeya ee caafimaadka, qalliinka dhaawacyada dagaalka iyo qalliinka indhaha. Maanta badi mashaariicdan waxaa ay noqdeen kuwo xaaladda degdeg ah ka shaqeeya oo gargaar siinaya bulshooyin ay jilcisey abaarta ba’an.
In kasta oo kooxaha MSF ay mudnaanta siinayaan in nafaqo-xumada ay ku daweeyaan Gaalkacyo, Jowhar, Guri Ceel, Diinsoor iyo
Mareerrey, haddana aad bey u adag tahay in la dhaafo xarumaha caafimaadka ee MSF si loo gaaro dadka ugu nugul bulshada. Verdu waxaa uu yiri: “In kasta oo dadaallo iyo wadahadallo joogto ah aan sameyney, haddan weli awood uma aan yeelan in mashaariic cusub aan ka furno oo aan hawlo cusub ka fulinno koonfurta Soomaaliya.”
Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, ayaa gaaritaanka kooban ee MSF ay ku gaareyso dadka u baahan waxaa sababey xannibaadaha ay
dhaqdhaqaaqeedu ku soo rogeen kooxaha hubeysan. Haseyeeshee, magaalada Muqdisho, dhibaatooyinku waxa ay la xiriiraan welwel uu ururku ka qabo nabadgelyadashaqaalihiisa. Xaaladda caasimadda ayaa ah mid aan degganeyn waxaana
gaaritaanka xaafadaha qaarkood caqabad ku ah rabshado/dagaallo teelteel ah oo
Magaalada Muqdisho, kooxaha caafimaadka ee MSF waxaa ay la dagaallamayaan jadeeco iyo nafaqo-xumo isbiirsadey, oo si gaar dhibaato uga haya carruurta. Labadii sano ee la soo dhaafey MSF waxaa ay sameysey laba xarumood oo bukaan-jiifka quudin ku daweeya oo markiiba lagu dabiibi karo 145 carruur ah. in ka badan 100 carruur ay nafaqo-xumo ba’an ay hayso oo ay u weheliyaan xanuunno ayaa horeyba loo dhigey xarumaha, oo 24ka saacba bixiya daryeel xooggan oo xaaladda degdegga ah wax looga qabto. Mid ka mid ah xaruumahan, ayaa 38 boqolkiiba carruurta ay nafaqo-xumadu hayso ee la dhigey toddobaadkii la soo dhaafey laga heley jadeeco. Dhowr kooxaha wareega ah ayaa sameeyey xarumo quudinta bukaan-socodka lagu sameeyo si loogu daweeyo carruurta ay nafaqo-xumada ba’an ay hayso ee aaney xanuunno u wehelin. Tan iyo 8dii Agoosto, kooxo kale ayaa in ka badan 16,000 carruur ah ka tallaaley cudurka
Kooxaha MSF ee wareega ayaa la kulmey dad aan tiro yareyn oo qaba caabuqyada neef-mareenka, caabuqyada maqaarka iyo daacuun. 25kii Agoosto, MSF waxaa ay furtey xarun lagu daweeyo daacuunka, taas oo la dhigey 22 qof.
Magaalada Muqdisho, sida Soomaaliya inteeda kaleba, waxaa looga baahan yahay in wax badan oo kale laga qabto si loo gargaaro dadka ku
nool qaar ka mid ah xaaladaha ugu adag dunida oo dhan.
Tags: huma, Malnutrition, Somalia, South Central Somalia